Fikarohana momba ny firaisana Ny fitarihana fanahy, ny fifandraisana ara-panahy sy ny zavakanto ara-panahy ao amin'ny vatana teraka amin'ny fanambadiana-fampidirana - Fikarohana momba ny fanambadiana vatana
Ao amin'ny tranga sasany ao amin'ny vatana vaovao, ny vaovao farany momba ny fiainana dia azo avy amin'ny fifandraisana ara-panahy na telepatia. Ny endri-tsoratra dia azo raisina ho endrika fifandraisana ara-panahy.
Ankoatr'izany, ny fitsabahana amin'ny fanahy dia azo tsidihana amin'ny famoahana ny vaovao momba ny fanambadiana momba ny vatana vaovao, toy ny fitarihana olona ho any amin'ny toerana iray izay ahitana ny fampahalalam-baovao taloha. Any amin'ny toerana iray misy fiainana taloha, ny olona iray dia mety mahita porofo amin'ny fiainana taloha na azon'izy ireo iainana fahatsiarovana ara-jeografia, toy ny fahatsiarovana ny fiainana taloha na ny fihetseham-po mifandray amin'io toerana io.
Ny Ghosts dia afaka miseho amin'ny fampitaovana ny fiainana momba ny fiainana taloha, araka ny aseho eo amin'ny sary eo ankavanana.
Ny fanahy koa dia afaka mifandray amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny nofy. Ny fanahy dia afaka maminavina na manambara ny fahatongavan'izy ireo manaraka amin'ny alalan'izany fomba izany, izay Ian Stevenson, MD, voalaza “Manambara nofy.” Amin'ity tranga ity, ny fanahy izay mikasa ny ho tonga nofo dia manolotra nofinofy amin'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana, matetika ny ho avy reny, ary mampita ny fikasana hateraka ao anatin'io fianakaviana io. Ny nofinofy nanambarana dia nitranga tamin'ny 22% tamin'ny raharaha reincarnation an'i Stevenson.
Ireo fanahy koa dia afaka mamorona hafatra an'ohatra amin'ny alàlan'ny fametrahana fifanoherana manan-danja, izay nantsoin'i Carl Jung ny fiovan'ny toetr'andro na ny fisehoan-javatra mifanaraka amin'ny synchronisme.
Ny ohatra iray mampihetsi-po indrindra amin'ny fitsabahana amin'ny fanahy dia ny fihetsika boky iray, izay nanazava ny fiainany taloha. Psychokinesis no teny ampiasaina hilazalazana ny fihetsik'ireo zavatra ara-batana amin'ny hery ara-panahy. Ny psychokinesis dia hita ao amin'ny Trangam-panjakan'olo-tokana an'i Louise Vanderbilt | Wayne Peterson.
Ny mari-pamantarana ho an'ny vatana vaovao indray miaraka amin'ny fitarihan'ny fanahy dia olona voahodidin'ny faribolana roa, izay maneho fanahy fanahy na fanahin'ny olona iray manokana, mamindra fampahalalana momba ny fiainana taloha na famantarana amin'ny fiainana taloha.
Firaisana ara-piraisana ara-nofo amin'ny fanahy na fanahy izay mitarika